Android မှာ podcasts တွေကိုနားထောင်ဖို့အကောင်းဆုံး application ၅ ခု Androidsis
Android မှာရှိတဲ့ podcasts တွေကိုနားထောင်ဖို့အကောင်းဆုံး applications များ
အချိန်တိုင်း FM ရေဒီယိုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိသည့် Android ဖုန်းများပိုမိုများပြားပါသည်။ ဤသည်အသုံးပြုသူများစွာမကြိုက်ဘူးတစ်ခုခုပါပဲ။ ကံကောင်းတာကငါတို့အကြိုက်ဆုံးအသံလွှင့်ရုံတွေကိုနားထောင်ဖို့ရေဒီယိုမလိုပါဘူး။ အဖြစ် podcasts ကဲ့သို့သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည်။ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဖုန်းမှရေဒီယိုကိုဝယ်လိုအားကိုနားထောင်နိုင်သည်။
Podscast သည်ဈေးကွက်တွင်တော်လှန်ရေးတစ်ခုဖြစ်သည် နှင့်၎င်း၏လူကြိုက်များတိုးဆက်လက်။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်အစီအစဉ်များကိုဖုန်းဖြင့် download လုပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအခါတိုင်းနားထောင်နိုင်သည်။ အများကြီးရှိပါတယ် Android မှာ podcasts တွေကိုနားထောင်ခွင့်ပေးတဲ့ application တွေ။ ဒီမှာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါ။
Play Store သို့ ၀ င်ပါက Android အတွက် podcast application များစွာရှိသည်။ တပ်ဆင်ရန်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်ခက်ခဲစေသောအရာ။ ထို့ကြောင့်၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင့်အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်၊ လက်ရှိရရှိနိုင်ပါအကောင်းဆုံးစာရင်း. သူတို့နဲ့တွေ့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။
1 TuneIn ရေဒီယို
2 iVoox ရေဒီယိုနှင့် Podcast တခု
3 အိတ်ကပ် Cast
4 podcast Go ကို
၎င်းသည်ဤအမျိုးအစား၏အသုံးချမှုတစ်ခုဖြစ်သည် အများဆုံးလူကြိုက်များသော ငါတို့ဘာရှာတွေ့နိုင်မလဲ။ အမှန်မှာ၎င်းသည် Google Play တွင်အများဆုံး download လုပ်သည်။ လုပ်နိုင် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ကိုတိုက်ရိုက်နားထောင်ကြည့်ပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ် ဦး ရှိသည် podcasts တွေကို၏ကြီးမားတဲ့ရွေးချယ်ရေး app ထဲမှာ။ ရရှိနိုင်သန်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့သူတို့ဟာအကြောင်းအရာတွေကိုအမျိုးအစားအလိုက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားလို့ပါ။ သင်ရှာဖွေနေသောအရာသည်သင်ရှာဖွေရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။
La Android တွင် application ကို download လုပ်ခြင်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အတွင်းပိုင်းစျေးဝယ်ရှာပေမယ့်။
TuneIn ရေဒီယို- ဂီတနှင့် FM ရေဒီယို
iVoox ရေဒီယိုနှင့် Podcast တခု
တစ်ခု option ကို စပိန်ဈေးကွက်တွင်လူကြိုက်များသည်။ လျှောက်လွှာတွင်အသံလွှင့်ချက်များစွာရွေးချယ်ထားသည့်အပြင်ရေဒီယိုကိုတိုက်ရိုက်နားထောင်ရန်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ ဒါဟာအစကျွန်တော်တို့ကို၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးတော်မူ၏ အသံမြန်နှုန်းနှင့်အသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ် အချိန်တိုင်း။ တနည်းကား, အရာအားလုံးဖြစ်ပါတယ် အမျိုးအစားအားဖြင့်ဖွဲ့စည်း ဒါကြောင့်တိကျသောအစီအစဉ်ကိုရှာရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသည်။
La Android အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကအတွင်းပိုင်းဝယ်ယူမှုရှိသည်ပေမယ့်။
Podcast & ရေဒီယို iVoox
ဤလျှောက်လွှာကိုလူအများကစဉ်းစားကြသည် ငါတို့ရှာတွေ့နိုင်တာအကောင်းဆုံး ယနေ့စျေးကွက်အပေါ်။ ဒါဟာကြီးစွာသောဒီဇိုင်းရှိပါတယ်, ပစ္စည်းဒီဇိုင်းအသုံးပြုရန်အလွန်အဆင်ပြေစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား podcasts များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်နှင့်ပြန်ဖွင့်အမြန်နှုန်းသို့မဟုတ်အသံပမာဏကိုပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည်။ ပရိုဂရမ်များ၏နိဒါန်းများကိုလည်းအချိန်မရွေးကျော်သွားနိုင်သည် ထို့အပြင်ဖြစ်ပါသည် Android Wear, Android Auto နှင့် Chromecast တို့ဖြင့်သဟဇာတဖြစ်သည်.
La ဤအပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်သည်ယူရို ၃.၂၅ ဖြစ်သည်။ အတွင်း၌ဝယ်ယူမှုနှင့်ကြော်ငြာများမရှိပါ။
podcast Go ကို
၎င်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလူကြိုက်များလာသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဖြစ်ပါသည် ဤအမျိုးအစားတွင်အကောင်းဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ခံရသည်။ ၎င်းတွင်အလွန်ရိုးရှင်းသောအင်တာဖေ့စ်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ထိရောက်မှုရှိပြီးအသုံးပြုသူများအတွက်လွယ်ကူသည်။ ငါတို့ရွေးစရာရှိသည် ဖြစ်စဉ်များကို download လုပ်ပါသို့မဟုတ်လူကြိုက်အများဆုံး podcasts တွေကိုကြည့်ပါ။ အခြားသူများနည်းတူကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်ဖွင့်အမြန်နှုန်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ငါတို့မှာလည်းအမျိုးအစားအလိုက်စီစဉ်ထားတယ်။
La ဒီ application ကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ ကျနော်တို့အတွင်းပိုင်းဝယ်ယူမှုကိုရှာဖွေပေမယ့်။
ရေးသားသူ: Sanity အသံ Apps
ဒါဟာလျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်သည် ဂူးဂဲလ်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံးတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လက်ရှိ Google Play အဖွဲ့ကဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အကြံပြုသောအက်ပလီကေးရှင်းများစာရင်းတွင်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အချို့သောအာမခံချက်ရှိပါတယ်။ ၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏ interface အတွက်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးရှင်းလင်းသည်။ လျှောက်လွှာကိုသွားလာရန်လွယ်ကူစေသည်။ ထို့အပြင်အရာအားလုံးကိုအမျိုးအစားအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
La ဒီ application ကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ ကျနော်တို့ကအတွင်းပိုင်းဝယ်ယူမှုရှာပေမယ့်။
Castbox - ပေါ့တ်ကာစ်များနှင့် အသံ
ရေးသားသူ: Castbox.FM - ရေဒီယို၊
Android မှာ podcasts တွေကိုနားထောင်ဖို့အကောင်းဆုံး application တွေပါ ငါတို့ယနေ့ရှာတွေ့နိုင်တယ် ၎င်းတို့အားလုံးသည်၎င်းတို့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်စေသည့်နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသည်အတွက်ထူးခြားသည်။ ဒါ့အပြင်အကောင်းတစ် ဦး ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ။ ဒီအပလီကေးရှင်းတွေထဲကဘယ်ဟာဟာအကောင်းဆုံးလို့ထင်လဲ? သူတို့ထဲကတစ်ခုခုကိုမင်းသုံးသလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android မှာရှိတဲ့ podcasts တွေကိုနားထောင်ဖို့အကောင်းဆုံး applications များ
GFXBench မှ TCL 5099 သတ်မှတ်ချက်များကိုဖော်ပြသည်